Walker oo balan qaad u sameeyay taageerayaasha Man City kaddib markii ay ku guuldarreysteen Champions League – Gool FM
Walker oo balan qaad u sameeyay taageerayaasha Man City kaddib markii ay ku guuldarreysteen Champions League
Dajiye May 30, 2021
(Manchester) 30 Maajo 2021. Daafaca midig kooxda Manchester City ee Kyle Walker ayaa u balan qaaday taageerayaasha City soo laabasho xoogan xilli ciyaareedka soo aadan, kaddib markii ay ku guuldarreysteen koobka Champions League.
Chelsea ayaa xalay markeedii labaad ku guuleystay koobka Champions League kaddib markii ay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda Manchester City, kulankii final-ka ahaa oo ay ku wada ciyaareen garoonka Estadio do Dragao magaalada Porto ee dalka Portugal.
Haddaba daafaca kooxda Manchester City ee Kyle Walker ayaa wuxuu bartiisa rasmiga ah ee “Twitter-ka” ku soo qoray:
“Waxaan sameynay wax walba xalay si aan uga farxino taageerayaasheena, waan ka xumay inaan awoodi weynay inaan ugu guuleysano koobka iyaga dartood.”
“Waxaan soo laaban doonaa inaga oo xoogan, waad ku mahadsan tihiin dhamaantiin taageeradiina.” Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Kyle Walker.
Kaddib markii uu xalay ku guuleystay Champions League, Thiago Silva oo Weerar ku qaaday Kooxdiisii hore ee Paris Saint-Germain
Chelsea oo qandaraas cusub ku abaal-marineysa mid ka mid ah xiddigaheeda kaddib markii ay ku guuleysteen Champions League